Banyere Anyị - Beijing Qinghua Haichuang International Trade Co., Ltd.
Beijing Qinghuahaichuang Ofesi Azụmaahịa Azụ Co., Ltd.
Anyị bụ ndị siri ike uwe mbupụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ mba ọzọ ahia mbupụ azụmahịa ruo ọtụtụ afọ, tumadi ka nnyocha na mmepe, mmepụta, management nke na-eto eto ejiji ndị ikom na ndị inyom n'elu. Companylọ ọrụ anyị ga-abụ mkpa ndị ahịa na imepụta uwe, teknụzụ, akwa jikọtara ọnụ, na-ebupute ya mgbe niile n'usoro njirimara ndị ahịa nke ejiji uwe, dịka mkpa nke ndị ọbịa ga-agbanwe (dịka: ụdị, teknụzụ pụrụ iche, ihe ọnụahịa chọrọ. .. ...)
Ugbu a niile ndị ahịa niile nwere nsogbu dị otú a, ya bụ, ọ na-esiri ike ịchọta onye ga-atụkwasị obi na ibe ya ga-arụkọ ọrụ ọnụ ogologo oge. Ọtụtụ mgbe, n'agbanyeghị ole ole ọ dị, ndị ahịa ọ bụla chọrọ iso ndị na-emepụta ya rụ ọrụ, ka iwelata ego ịzụrụ belata. Ma asọmpi n'ọma ahịa taa abụghị naanị ọnụahịa. Onye ọ bụla na-azụ ahịa na-agba mbọ iji gosipụta ngwaahịa pụrụ iche nke kwesịrị ekwesị maka onye zụrụ ya. Mana ụlọ ọrụ nhazi ọdịnala enweghị ike ịnye ụdị ọrụ a. N'iburu nke a, ụlọ ọrụ anyị ugbu a na mmepụta na nyocha na mmepe n'ime otu ụdị azụmaahịa, nwere ike ịnye gị ọrụ ndị a:
1. Inye ntụpọ ngwaahịa nke anyị onwe anyị ụdị.
2.Gbanwee ma meputa ngwaahịa nke anyi dika ihe ndi choro choro.
3.Developu ma meputa ohuru ohuru dika ihe ndi choro choro
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anyị enyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 1 nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, jaket owu, uwe mkpuchi, otu mkpuchi na ụdị ndị ọzọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ama ama na Russia, Turkey, Ukraine, wdg. adọ nnyefe ụbọchị na-eche echiche ọrụ n'ọdịnihu, anyị ụlọ ọrụ meriwo otuto na ntụkwasị obi nke ndị ahịa.
Anyị factory emi odude ke anqing obodo anhui n'ógbè, bụ otu n'ime akwa emmepe na China. Mmepụta ngwaahịa na ụlọ ngosi ihe ngosi dị na Beijing. Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ anyị nwere onye nnọchi anya Russia na-adịgide adịgide na Moscow, anyị nwere ike ịtụle ihe gbasara imekọ ihe ọnụ yana nkọwa ngwaahịa maka ịdị mma gị n'oge ọ bụla.
Anyị na-aga n'ihu ịgbasa ọnụ ọgụgụ nke mmepụta na ịrụ ọrụ n'otu oge, mana na-aga n'ihu na-emeziwanye arụmọrụ na-arụ ọrụ, na-akwado nkwado na mmepe nke ndị ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere otu ndị na-emepụta uwe pụtara ìhè, ọtụtụ ndị otu ọkachamara na-ahụ maka njikwa ọrụ, otu ndị ọrụ nyocha nyocha siri ike, ga-, dị ka mgbe niile, na-akwado nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke ndị ọkachamara, lekwasị anya, lekwasị anya, ịdabere na ndị otu njikwa dị mma, mmụọ mmụọ ọhụụ nke oru, na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ezigbo ọrụ.